Yohane Adiyisɛm 17:1-18
“Babilon Kɛse” atemmu (1-18)
Tuutuuni kɛse no te aboa kɔkɔɔ bi so (1-3)
Ná aboa no ‘wɔ hɔ, nanso onni hɔ, na ɔbɛsan afi amoa donkudonku no mu aba’ (8)
Mmɛn du no ne Oguammaa no bɛko (12-14)
Mmɛn du no bɛtan tuutuuni no (16, 17)
17 Na abɔfo baason a wokurakura nkankyee ason+ no baako bae, na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Bra, na mɛkyerɛ wo tuutuuni kɛse a ɔte nsu pii so no atemmu.+ 2 Ɔno na asaase so ahemfo ne no abɔ aguaman,*+ na n’aguamammɔ* nsã no ama wɔn a wɔtete asaase so no abobow.”+ 3 Na ɔnam* honhom no tumi so de me kɔɔ sare so. Na mihuu ɔbea bi sɛ ɔte akekaboa kɔkɔɔ bi so. Ná abusudin ayɛ akekaboa no ma, na na ɔwɔ ti ason ne mmɛn du. 4 Ná ɔbea no hyɛ ataade afasebiri+ ne ataade kɔkɔɔ, na na ɔde sika kɔkɔɔ ne aboɔden abo ne abohene ahyehyɛ ne ho.+ Afei nso, na okura sika kɔkɔɔ kuruwa wɔ ne nsam, na na akyiwade ne n’aguamammɔ* a ɛyɛ tan ayɛ no ma. 5 Ná wɔakyerɛw din bi a ɛyɛ ahintasɛm wɔ ne moma so sɛ: “Babilon Kɛse, tuutuufo+ ne asaase so akyiwade maame.”+ 6 Na mihui sɛ akronkronfo mogya ne Yesu adansefo mogya+ ama ɔbea no abow. Bere a mihuu no no, me ho dwiriw me paa. 7 Enti ɔbɔfo no bisaa me sɛ: “Adɛn nti na wo ho adwiriw wo? Mɛka ɔbea+ no ne akekaboa a ɔbea no te no so a ɔwɔ ti ason ne mmɛn du+ no ho ahintasɛm akyerɛ wo: 8 Aboa a wuhuu no no, na ɔwɔ hɔ, nanso onni hɔ, na ɔrebefi amoa donkudonku+ no mu apue, na ɔbɛkɔ ɔsɛe mu. Na sɛ wɔn a wɔtete asaase so no, kyerɛ sɛ, wɔn a efi bere a wɔhyɛɛ wiase ase no wɔnkyerɛw wɔn din wɔ nkwa nhoma mmobɔwee+ no mu no hu sɛnea na aboa no wɔ hɔ, nanso onni hɔ, na ɔbɛsan aba no a, ɛbɛyɛ wɔn nwonwa pii. 9 “Ehia nyansa* na obi ate asɛm yi ase: Ti ason+ no gyina hɔ ma mmepɔw ason a ɔbea no te so no. 10 Ahemfo baason na ɛwɔ hɔ: Baanum ahwe ase, baako wɔ hɔ, na ɔfoforo no nnya mmae; na sɛ ɔba a, ɛsɛ sɛ ɔtena hɔ kakra. 11 Na akekaboa a na ɔwɔ hɔ nanso onni hɔ no,+ ɔsan yɛ ɔhene a ɔto so awotwe, na ofi ason no mu na ɛbae, na ɔbɛkɔ ɔsɛe mu. 12 “Mmɛn du a wuhui no yɛ ahemfo du a wonnya nnyaa ahenni, nanso wɔne akekaboa no nya tumi sɛ ahemfo dɔnhwerew baako. 13 Eyinom wɔ adwenkoro, enti wɔde wɔn ahoɔden ne tumi ma akekaboa no. 14 Eyinom ne Oguammaa+ no bɛko, nanso esiane sɛ Oguammaa no yɛ awuranom mu Awurade ne ahemfo mu Hene+ nti, obedi wɔn so nkonim.+ Afei, wɔn a wɔka ne ho a wɔafrɛ wɔn na wɔapaw wɔn na wodi no nokware no nso bedi nkonim.”+ 15 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Nsu a wuhui a tuutuuni no te so no, egyina hɔ ma nkurɔfo ne nnipakuw ne aman ne kasa* horow.+ 16 Na mmɛn du+ a wuhui no, ne afei akekaboa+ no, eyinom bɛtan tuutuuni+ no na wɔayɛ no pasaa na wɔama wada adagyaw, na wobedi ne nam na wɔde ogya ahyew no dwerɛbee.+ 17 Onyankopɔn na ɔde hyɛɛ wɔn komam sɛ wɔmma ne nsusuwii mmra mu,+ yiw, sɛ wɔnyɛ adwenkoro mfa wɔn ahenni mma akekaboa+ no nkosi sɛ Onyankopɔn nsɛm bɛba mu. 18 Na ɔbea+ a wuhuu no no gyina hɔ ma kurow kɛse a ɛwɔ ahenni a edi asaase so ahemfo so no.”
^ Anaa “ɔbɔfo no nam.”
^ Anaa “adwene a ɛwɔ nyansa.”
^ Anaa “tɛkrɛma.”